आज “रुपा”को जन्मदिन, श्रीमती लाई यस्तो बनाउने चाहाना थियो कृष्णको, – Khabar Silo
काठमाडौं २ कार्तिक / “माया” दुुई अक्षरले बनेको शब्द जुन सुन्नमा जति सरल छ तर उतिनै गहिराइ पनि तिनीहरुको लागि जो असल प्रेमिहरु हुन्छन्।
त्यस्तै एक निस्वार्थ अनि अमर प्रेम कहानी कुनै दिन स्वयंम पढेको थिए। जो रहेको थियो “मुनामदन” त्यस्तै आज वास्तविक अनि यथार्थ मै देख्न पुगे अर्को प्रेम कथा “कृष्ण वलि र रुपा मगर”को, मुनामदन एक काल्पनिक प्रेमकहानी भएता पनि तर यथार्थमा उनिहरु भन्दा “कृष्ण र रुपा”को अति उच्च रहेको छ, रुपाले वास्तब मै मुनाले जस्तो भुमिका निर्वाह गरेर देखाइन्।
रुपाको कृष्णप्रतिको प्रेम देख्दा निस्वार्थ माया गर्ने मान्छे पनि अझै संसारमा छन् र झैं लाग्यो । सांच्चै महान् रुपा बहिनीलाई मैले सोलुट गरें ।
कस्सम सम्झिदा मन भक्कानिन्छ आँखा रसाउछ। हिरो बन्न चाहन्थे तर के गर्नु ? फिल्मको सुटिंगमै भेटेर गरेका थिए, अन्तरजातिय बिवाह । बुढीलाइ MBBS पढाउने सपना थियो ।
पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! जतिबेला तपाईंको मृत्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक लास बन्न सुरु गर्छ । अरे … लास लिएर आउनुहोस्। … लास लाई उठाउनुहोस्। .. लास लाई सुताउनुहोस। . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण […]
के तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरको बानी मन पर्दैन ?
विकास र रोशनी केही महिना अगाडि मात्र साथी बनेका थिए । बारम्बारको भेटघाटमा रोशनीलाई विकासको साथ र व्यक्तित्व राम्रो लाग्दै गयो । विकासको व्यक्तित्वबाट रोशनी प्रभावित हुन थालिन् । विस्तारै विस्तारै दुवैमा प्रेम हुन थाल्यो र उनीहरुबीच शारीरिक सम्बन्ध पनि भयो । विकासले सधैं रोशनीलाई नारी-पुरुष समान भएको कुरा गर्थे । अन्त्यमा, रोशनीले विकाससँग विवाह […]
नेपाली बोल्ने र नेपाललाई मन पराएर माया गर्ने धेरै विदेशीहरु छन् नेपालमा । तीनै मध्यकी एक हुन् विउन्सी ।उनी अफ्रिकन हुन् । लकडाउनको समयमा नेपालमै थुनिएकी विउन्सीले राम्ररी नेपाली बोल्न जाछिन् । नेपाली बोल्ने मात्र नभई उनले नेपाली लोक गीतहरुपनि उत्तिकै राम्रो लयमा गाउन जान्दछिन् । उनको बोली र गीतले सबैलाई आर्कषित गदर्छ ।लकडानका कारण […]